Rita, Writing for My Sake!: 120829
Posted by Rita at 8/29/2012 12:09:00 PM
hmmm ... might be easier said than done! worthatry though ...
လုပ်ဖို့ခက်တယ်။ ခက်တယ်ဆိုတာထက် မဖြစ်နိုင်ဘူး။ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ သေတဲ့လူ ပြန်ရှင်အောင်လုပ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တာမျိုး၊ မသေဆေးဖော်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တာမျိုး၊ လူကနေ မျောက်ဖြစ်အောင် ဖန်ဆင်းဖို့ မဖြစ်နိုင်တာမျိုး မဟုတ်ဘူး။
နှစ်ဘက်စလုံးက ဗမာတွေဖြစ်နေလို့မို့ 'ဆင်ပြောင်ကြီး အမြီးကျမှ တစ်' တဲ့ မဖြစ်နိုင်တာမျိုးကြီး။ ဆင်ဖမ်းမယ် ကျားဖမ်းမယ် တခဲနက် အော်ရုံအော်ပြီး တကယ်လက်တွေ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ဆိုတော့မှ အဖျားရှူးချမယ့် မဖြစ်နိုင်တာမျိုးကြီး။ တခါတခါကျ နှစ်ဘက်စလုံး ညှိပြီး ပွဲဖြစ်ရုံ၊ လူစိတ်ဝင်စားရုံ ဇာတ်တိုက်ထားသလားလို့တောင် သံသယဖြစ်လာတယ်။ ကိုးရီးယားကား အထာပေါ့လေ။ ထိပ်တိုက်တွေ့ရင် ဇာတ်က ရှေ့ဆက်လို့မရဘဲ ပြီးသွားမှာကိုး။
ကိုယ့်အမြင်ပြောတာပါ။ မှားချင်လည်းမှားမယ်။ =)
တကယ်ပြောတာ။ ပိုက်ဆံရှိများလို့ကတော့ နှစ်ဘက်စလုံးကို ရုံသွင်းပြီးပြပစ်မယ်။ (နှစ်ဘက်စလုံး ရူးချင်ယောင်ဆောင်သွားကြမှာ သိပေမယ့် အချီကြီးရမယ့်ပွဲမျိုး စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်တာပေါ့လေ) =D